#Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ABOn labse ni deeggara. – Kichuu
#Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ABOn labse ni deeggara.
#Mootummaa_Ce‘umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ABOn labse ni deeggara.
#Ibsa Caasaa hakiimota Oromiyaa irraa kenname
Caasaan gurmuu hakiimota Oromiyaa nagaa fi tasgabbiin Oromoo fi lammiilee Oromiyaa keessa jiraataniif akka mirkanaa’uuf labsa ABO mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa hundeessuun barbaachisaadha jedhee waamicha dhiyyeesse nuyi caasaan Hakiimota Oromiyaa ni deeggarra ,ni tumsina.
Nuyi Hakiimotni ogummaa keenyaan yeroo saba keenya tajaajilaa jirutti reebichi, arrabsoo doorsifnii fi hidhaan hakiimota Irratti waraana Mootummaan bobbaafameen nurratti raawwatamaa tureera ammas erga barri bulchinsa Mootummaa aangoorra turee dhumatee waraanni silaa nagaa biyyaa fi Lammiilee eeguu qabu qaama afaan qawween biyyan bulcha jedhu gariin yeroo tumsuuf abbalu argaa jirra bakkoota adda addaatti kun immoo ogummaa waraanaa akka hin taane hubachuu barbaachisaadha jenna.
Poolisiin qaama nagaa ummataa eegsisu malee mootummaa aangoo bara bulchisa isaa xumuratee kan tiksu miti kanaaf caasaan hakiimota Oromiyaa ammaan booda ummata keenya kan waraanaan ajjeefamutti yeroo saanduqa qopheessinu , kan rasaasaan madaayu yeroo itti wal’aannu osoo hin taane yerootti Mootummaan Cee’umsaa Oromiyaa dhaabbatee rasaasaan rukutamanii ajjeefamuun, qaamaa hir’achuun, saamicha irratti raawwatamuun, haadholii fi shamarran gudeedamuun akka dhaabbatuuf mootummaa Cee’umsaa Oromiyaa ABO waamicha godhe akka lammiilee Oromiyaa hundaatti gama Caasaa keenyaanis tahe Ogummaa keenyaan lammiilee cinaa dhaabbannee hundi tumsuu qabu jenna.
Nuyi caasaan hakiimota Oromiyaas ammaan booda doorsifni, arrabsoon,hidhaanii fi saamichi maaliif ilmaan Oromoo Sabboontota tahan yaaltan jedhamee kan hakiimota Irratti raawwatamu akka xumura argatuuf mootummaa Cee’umsaa Oromiyaa ABO labsame kana ni tumsuuf waan nurraa eegamu ni bahanna.
Caasaa Hakiimota Oromiyaa irraa
Via Hangafa Afranqallo